Wehkamp turnover 782,7 million euros last year - UN STORE
unstore June 23, 2022 0	8 sec read
डच अनलाइन डिपार्टमेन्ट स्टोर Wehkamp ले २०२१ मा कारोबारमा ७८२,७ मिलियन युरो कमायो। त्यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो। खुद्रा विक्रेताले आफ्नो राजस्व कायम राख्यो, यद्यपि अनलाइन किनमेल पूर्व-महामारी स्तरहरूमा फर्किँदैछ।
Wehkamp ले जारी गर्यो वित्तीय परिणामहरू 2021-2022 को लागि। कम्पनी Bol.com, Coolblue र Zalando सँगसँगै नेदरल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन स्टोरहरू मध्ये एक हो। २०२० मा, अनलाइन किनमेलको शिखरको कारण अनलाइन स्टोरको कुल नाफा दोब्बरभन्दा बढी भयो। गत वर्षको अन्त्यमा Wehkamp ले सम्भावित IPO घोषणा गर्‍यो।
७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ
Wehkamp आफ्नो राजस्व स्तर कायम गर्न व्यवस्थित। २०२१ मा, कम्पनीले कारोबारमा ७८२,७ मिलियन युरो कमायो – अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढेको। Wehkamp भन्छन् कि यो धेरै हदसम्म kleertjes.com, एक डच बालबालिकाको फेसन रिटेलर को अधिग्रहण को लागी धन्यवाद हो।
कम्पनीले कारोबारमा 782,7 मिलियन यूरो बनायो।
Wehkamp को EBITDA 59,3 मिलियन यूरो बाट 48,8 मिलियन यूरोमा झर्यो, यद्यपि। खुद्रा बिक्रेताका अनुसार वित्तीय शाखा टिंकासँगको सम्बन्ध तोड्नु र गोदामको रोजगारी लागत बढेकोले यस्तो भएको हो । हालको श्रमिक अभावका कारण गोदाम मजदुरहरूलाई निश्चित करार दिइएको थियो।
२०२२ मा नयाँ पुरुष-केन्द्रित पसल
kleertjes.com को सफलता पछि, Wehkamp थप अधिग्रहण र नयाँ विशेष पसलहरूको लागि तयारी गरिरहेको छ, CEO ग्राहम ह्यारिस भन्छन्: “2022 मा, हामी पुरुषहरूमा केन्द्रित एक समर्पित अनलाइन किनमेल गन्तव्य सुरु गर्नेछौं र हाम्रो बलियो प्रस्ताव गर्न थप अधिग्रहणहरूको लागि तयार छौं। पूर्ति विशेषज्ञता, पोर्टफोलियो र उत्पादन दायरा अझ फराकिलो ग्राहक समूहमा।
इलेक्ट्रोनिक्स देखि घरेलु उत्पादनहरु सम्म
अनलाइन किनमेलमा महामारीको बूम हुनु अघि, Wehkamp रातोमा 17 मिलियन यूरो भन्दा बढी थियो। 2019-2020 को तुलनामा, राजस्व गत वर्ष लगभग 30 प्रतिशतले बढेको छ।
Wehkamp ले कम मार्जिन संग इलेक्ट्रोनिक्स हटायो।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, Wehkamp ले कम मार्जिनका साथ इलेक्ट्रोनिक्स र उपकरणहरूलाई अलविदा भन्यो र आफ्नो गृह खण्डमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यो। महामारीको समयमा, यो वर्ग सुनको खानी बन्यो। यसले ग्राहकको संख्या 2,1 बाट 2,5 मिलियनमा बढ्यो। हाल, Wehkamp अझै 2,4 मिलियन सक्रिय ग्राहकहरू छन्।
Previous Article	Apple iOS 16 Will Let Users Report Spam Messages
Next Article	“He likes to be the centre of attention” – Inter Milan star says Zlatan Ibrahimovic doesn’t act his age in astonishing rant
कम प्रदर्शन गर्ने मार्केटिङ इमेलहरू प्रायः समग्र कार्यक्रम बिग्रेको सूचक हुन्। क्लिकहरू, रूपान्तरणहरू, र राजस्वमा कमीहरू सामान्यतया ठूलो समस्याको लक्षण हुन्। यस पोष्टमा, म खराब […]
May 24, 2022 0	5 sec read
How We Launched A Business Intelligence Solution [United Kingdom] – Starter Story
नमस्ते! तपाई को हुनुहुन्छ र कुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो ? हामी टोली निर्णायक छौं। म आफैं, क्रेग स्मिथ, सह-संस्थापक र प्रमुख ब्रान्ड अफिसर र माइक […]
June 15, 2022 0	12 sec read
Women’s History Month serves asadedicated time to honor generations of trailblazing women. Recognized annually in March, it celebrates women’s contributions to history, culture […]
April 29, 2022 0	11 min read
Buzzsprout vs Anchor: The Battle of The Podcast Hosting Services
Want to make your own podcast? Don’t get hung up on where to host it! Buzzsprout and Anchor are both platforms that empower you to […]
June 10, 2022 0	9 min read